Burco Ganaaxa Ka Dhacay Waa Gar ,Burco Qabyaalad Ayaa Halkaa dhigtay.W/Q. Mustafe Axmed Maxamed Geeddi
Monday November 23, 2020 - 15:19:49 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Waxba yaynaan dhaliisha guddah Burco ka jirta cid kale la raadsan.
Maahmaah ayaa hayd "Nin daad qaaday Xunbo cuskay " mar ba meel yaan la isku qaadin ee dhaliisha guddaha Burco ka jirta yaan cid kale lagu eersan.
Koobkii Burco lagu qabtay ayaynu ogayn in tababare Dhoonbir ninkii u is yidhi.!. baddel u ka diiday oo wax kale iska daaye baaska kubada tolniimo la isku siinayay oo aad moodaysay qubanihii magaha qabaa'ilka ee tolku qaybsan jiray.
Maroodijeex Waxaa dega Beelo badan ,waxaase la isku xushaa xirfada bal e' waxaaba u ciyaar ciyaartooy reer hargaysa ah oo aan beel ahaan kasoo jeedin Hargaysa.